दमास्कस कसरी लेख्ने? Damson plum के हो यसको Tdk को मतलब के हो - कसरी Writ.Info गर्ने
दमास्कस कसरी लेख्ने
प्लम सही हिज्जे
प्रत्यय अलग लेख्नुपर्दछ, किनकि यो प्रत्यय को अर्थ केहि हो। तर हामी कसरी सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्छौं कि प्रत्यय सँगसँगै लेखिएको छ वा अलग? त्यो पूरकको लागि प्रत्यय लानुहोस्। यदि वाक्य पढ्दा त्यहाँ कुनै विकृति छ भने, यो ज्ञात हुनुपर्छ कि यो छुट्टै लेख्नु पर्छ। उदाहरण: मैले सुनेको तपाईंले बिर्सनुभयो। -Ler ल्याउन: मैले तहखाने सुने ... यो अलग लेख्नु पर्ने जस्तो देखिदैन। तपाईंको ढिला भयो। थप ल्याऊ तपाईंको ढिला भयो। त्यहाँ कुनै विकृति छैन, यो छेउछाउमा लेख्नु पर्छ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाई छुट्टै लेखिएको शब्द खोज्न वा अर्को छेउमा लेखिएको वा हाम्रो शिक्षकहरुलाई सोधेर सिक्न सक्नुहुन्छ। कृपया नहिचकिचाउनुहोस्।
स्पष्ट हुनको लागि, धेरै व्यक्तिले हिज्जे नियमहरूलाई वेवास्ता गर्दछ यदि त्यहाँ हाम्रो परीक्षा प्रणालीमा हिज्जे गल्तीहरू छैनन् भने। वास्तवमा, त्यहाँ एक पोइन्ट छ कि ध्यानबाट उम्कन्छ। हाम्रो जिब्रो को शब्दहरु मा उत्पन्न हुने घर्षण उसलाई गहिरो हल्लाउन सक्छ। आँखाका अनुसार यसले हाम्रो भाषा बिग्रनबाट रोक्छ; हामीले उनलाई पूर्व प्रयोग गर्न र सबैलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। शब्द दुबै गहिरो जरा, ऐतिहासिक र सुन्दर संचार विधिहरू हुन्। यसको रक्षा गर्नुको अर्थ हाम्रो संस्कृतिको रक्षा गर्नु हो, संस्कृतिको रक्षा गर्नु भविष्यको रक्षा गर्नु हो।
डेमसन प्लमको अर्थ के हो?
दमास्कस कसरी लेख्ने?
प्लम बेर स्पेलिंग गाइड
स्लेट र color्ग